Email Mr Chen
Mr Chen သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ မှစတင်၍ BSY အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ research-informed နှင့် သေသေချာချာလေ့ကျင့်ထားသော English (LOTE) စာသင်ကြားပေးသော ဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် တရုတ်ဘာသာစကားကိုလဲ ကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းပါသည်။ ဒုတိယဘာသာစကားအနေဖြင့် တရုတ်ဘာသာနှင့် Chinese B International Baccalaureate (IB) Diploma Program (DP) အတွက် Standard Level (SL) & Higher Level (HL)စသည့်ဒီပလိုမာ များရရှိထားပါသည်။
MSc Education, University of Wisconsin-Platteville; M.Ed. The Flinders University of South Australia; PGCE, Keele University; BA, Fudan University; TCSOL Cert, Beijing Foreign Studies University.
သင်ကြားမှုအပြင်သူသည်တရုတ် B အတွက် IB စာမေးပွဲ စစ်ဆေးသူနှင့် Mandarin အတွက် Cambridge International Examinations (CIE) စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ခရီးသွားခြင်းနှင့်မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများအကြောင်းလေ့လာခြင်းကိုနှစ်သက်ပါသည်။